Collagen က ခန္ဓာကိုယ်ကို ဘယ်လိုအကျိုးပြုနေလဲ? - For her Myanmar
အသားအရေ တင်းရင်းလှပစေတာက အသက်
ကော်လာဂျင် (Collagen) ဆိုတာ ယောင်းတို့ကျန်းမာရေးအတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့အရာပါ။ ဒါကတော့ အလှအပရေးရာ ကျွမ်းကျင်သူတွေ၊ အလှအပဆိုင်ရာ ဂုရုကြီးတွေ ပါးစပ်ဖျားက မချတမ်း ပြောကြတဲ့ စကားပေါ့.. သူငယ်ချင်းတွေကြားထဲမှာ ပြောကြတာလည်း ကြားဖူးကြတယ်ဟုတ်? ခေတ်မီသူတိုင်း ကော်လာဂျင်ကို သိကြသည်ပေါ့လေ… ဒါ့အပြင် ကော်လာဂျင်ကို ခရင်မ်တွေ၊ မိတ်ကပ်ပစ္စည်းတွေ၊ ပေါင်ဒါတွေ၊ ဆေးလုံးတွေ စသဖြင့် ပုံစံမျိုးစုံ လုပ်ပြီး သုံးစွဲလာကြတာ မျက်မြင်ပါပဲနော်…
ကော်လာဂျင်ကို ယောင်းတို့ရဲ့ ကြွက်သား၊ အရေပြား၊ သွေး၊ အရိုး၊ အရွတ်တွေကနေ ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ကော်လာဂျင်က –
အရေပြားရဲ့ ကျုံ့နိုင်ဆန့်နိုင်အား ကောင်းစေပါတယ်။
အရိုးနဲ့ ကြွက်သားတွယ်ဆက်မှုကို အားပေးပါတယ်။
အရိုးအဆစ်နဲ့ အရွတ်တွေကို ခိုင်ခံ့စေပါတယ် ယောင်းတို့ရေ…
ဆိုတော့ ကော်လာဂျင်ဆိုတာ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အဓိကလိုအပ်ချက်လို့ ဆိုမယ်ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူးနော်…
တကယ်တော့ ယောင်းတို့၊ အက်ဒ်မင်တို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်က ကော်လာဂျင်ကို ကောင်းကောင်း ထုတ်လွှတ်ပေးနိုင်ပါတယ်နော်.. ဒါပေမဲ့ ထုတ်လုပ်နိုင်မှုက အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ ကျဆင်းလာနိုင်တဲ့အပြင် ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်မျှတစွာ မစားခြင်း၊ နေလောင်ခြင်းတွေကလည်း ကော်လာဂျင်ထွက်ရှိမှုကို တားဆီးထားပါတယ်။
ကဲ.. အဲဒီလိုတွေ ကော်လာဂျင်တွေ လျော့လာပြီ၊ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ကော်လာဂျင်ထွက်နှုန်း နည်းလာပြီဆိုရင် ဘာတွေ ဖြစ်လာမှာတဲ့လဲ?
ဒါဆို ကော်လာဂျင်ရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကရော?
(၁) အဆစ်အမြစ်ကိုက်ခဲခြင်းကို သက်သာစေပါတယ်
အသက်အရွယ်ကြီးရင့်လာတာနဲ့အမျှ ကော်လာဂျင်ဟာလည်း ခန္ဓာကိုယ်မှာ လျော့နည်းလာပါတယ်။ ဒီလိုအခါမှာ အကြောအချဉ်တွေ တောင့်တင်းပြီး အဆစ်အမြစ်တွေ ကိုက်ခဲတတ်ပါတယ်။ ဒီဝေဒနာတွေ သက်သာပျောက်ကင်းအောင် ကော်လာဂျင်တွေ တိုးမြှင့်ပေးဖို့လိုအပ်လာပါပြီ။
၂၀၀၉ ခုနှစ် လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေအရ ကြက်လည်ချောင်းရိုးကနေ ပြုလုပ်ထားတဲ့ ကော်လာဂျင်တွေက အရိုးအဆစ်ကိုက်ခဲခြင်းကို ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက် သက်သာစေပါတယ်တဲ့ ယောင်းရေ။
(၂) အသားအရေကို တင်းရင်းစေပါတယ်
ကော်လာဂျင်ရဲ့လူသိအများဆုံး ကောင်းကျိုးတစ်ခုပါ။ အသားအရေကို တင်းရင်းပြီး တောက်ပမှုတွေကို ပေးစွမ်းပါတယ်။ ဒီ မရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့ ပရိုတင်းဓာတ်ဟာ အရေပြားရဲ့ ကြုံ့နိုင်၊ဆန့်နိုင်စွမ်းကို အထောက်အကူ ပေးတဲ့အတွက် ယောင်းကိုအရွယ်တင်စေပြီး ကျန်းမာလှပစေပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ ကော်လာဂျင်ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းတွေ ကျလာတာမို့ ဒီအချိန်တွေဆို အသားအရေ တင်းရင်းမှု မရှိတော့ဘဲ ခြောက်သွေ့လာပြီး အိုမင်းရင့်ရော်လာစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါဆို ယောင်းအတွက် ကော်လာဂျင်ကို အပြင်ကနေ သုံးစွဲပေးဖို့လိုအပ်လာပါပြီ။ ဒီလို သုံးစွဲမယ်ဆိုရင်တော့ ၈ ပတ် အတွင်းမှာ အရေပြားတွန့်တာတွေကို သိသိသာသာ ပျောက်ကင်းလာတာကို တွေ့ရမှာပါနော်.. (ခုတောင် ကော်လာဂျင်တွေ သောက်ရမလားလို့ စဉ်းစားနေပြီမလား 😛 )
(၃) ကြွက်သားတွေကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ပေးပြီး အဆီတွေကို လောင်ကျွမ်းစေပါတယ်။
ကြွက်သားတစ်သျှူးတွေရဲ့ အဓိကလိုအပ်ချက်ဟာ ကော်လာဂျင်ပါပဲ။ ကော်လာဂျင်မှာ ဂလိုင်စင်း- Glycine နဲ့ အမိုင်နိုင်အက်စစ် တို့ ပါဝင်တဲ့အတွက် ကြွက်သားတည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာ အရမ်းကို အသုံးဝင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Gym ဆော့နေတဲ့သူတွေအတွက် ကော်လာဂျင်ဟာ မရှိမဖြစ်တဲ့အရာတစ်ခုပါနော်..
(၄) တင်ပါးဆုံနဲ့ ပေါင်နားရှိ အဆီခဲများကို လောင်ကျွမ်းစေပါတယ်။
အရေပြားအောက်မှာရှိတဲ့ အဆီလွှာတွေ များလာတာနဲ့အမျှ အပေါ်ကို တွန်းထိုးလာတဲ့အခါ အဖုအထစ်၊ အချိုင့်တွေ ဖြစ်လာပါတယ်။ ကော်လာဂျင်က အဆီလွှာတွေကို လောင်ကျွမ်းစေတဲ့အတွက် ခန္ဓာကိုယ်ကို သွယ်လျလှပစေပါတယ်။
(၅) အစာခြေစနစ်ကို ကောင်းမွန်စေပါတယ်
အူထဲမှာရှိတဲ့ ကော်လာဂျင်ဟာ အစာခြေလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ကို ကျန်းမာသန်စွမ်းစေပါတယ်နော်။ အူထဲမှာ ကာကွယ်ထားတဲ့ စနစ်ပြောင်းလဲသွားရင် ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ကော်လာဂျင် လျော့နည်းလာတာနဲ့အမျှ အူရောင်ခြင်းကို ပိုပြီး ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်တဲ့ကွယ်။
ဒါဆို ကော်လာဂျင်ကို အစားအစာထဲမှာ ဘယ်လို ထည့်စားသင့်သလဲ?
အရိုးစွတ်ပြုတ်သောက်သုံးပါ။ ကော်လာဂျင် ကြွယ်ဝရုံတင်မကပါဘူး၊ အရသာလည်းရှိ၊ ပြုလုပ်ရလည်း လွယ်ကူပါတယ်။ ဒါ့အပြင် စွတ်ပြုတ်အဖြူထည်သောက်သုံးရတာ ရိုးလာပြီဆိုရင် ကိုယ်ကြိုက်ရာ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ၊ အသားတွေထည့်ပြီး ထမင်းနဲ့ တွဲဖက်သုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်။
ပေါင်ဒါ ဂျယ်လတင်- Gelatin သုံးပါ။ ဒီပေါင်ဒါမှုန့်ကို ရေနဲ့ရောပြီး စွပ်ပြုတ်၊ စတူးထဲမှာ ထည့်ပြီး သောက်သုံးလို့ ရပါတယ်။
Collagen Peptides သုံးစွဲပါ။ ဒါကိုတော့ ဈေးကွက်ထဲမှာလည်း အလွယ်တကူ ဝယ်ယူလို့ ရပါတယ်နော်။ သူ့ကို အစာခြေလိုက်တဲ့အခါမှာ အူက စုပ်ယူထားနိုင်တာမို့ ကော်လာဂျင်ကို ခန္ဓာကိုယ်က အပြည့်အဝ ရရှိနိုင်တာမို့ တကယ် အသုံးဝင်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုပါ။ ဒါကိုမှ ပေါင်ဒါမှုန့်ပဲ ရှိတယ်ဆိုရင်လည်း ရပါတယ်။ ဒီ ပေါင်ဒါမှုန့်ကို ကိုယ်သောက်မယ့် အအေး၊ အပူ၊ မစ်ရှိတ် စသဖြင့် ထဲကို ဖြူးပြီး သောက်လို့ရပါတယ်။
ယောင်းတို့ရေ…ဒီလောက်ဆိုရင် ကော်လဂျင်ကယောင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ဘယ်လောက်ထိအောင် အကျိုးပြုနိုင်တယ် ၊ ကော်လဂျင်တွေ လုံလောက်သွားစေဖို့ ဘယ်လိုတွေ စားသုံးရမယ်ဆိုတာတွေကို ကောင်းကောင်းကြီး သိသွားလောက်ပြီ ထင်ပါတယ်နော်…
အားလုံးပဲ ကျန်းမာလှပတဲ့ ဘဝလေးတွေ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေကွယ်..
အသားအရေ တငျးရငျးလှပစတောက အသကျ
ကျောလာဂငျြ (Collagen) ဆိုတာ ယောငျးတို့ကနျြးမာရေးအတှကျ မရှိမဖွဈ လိုအပျတဲ့အရာပါ။ ဒါကတော့ အလှအပရေးရာ ကြှမျးကငျြသူတှေ၊ အလှအပဆိုငျရာ ဂုရုကွီးတှေ ပါးစပျဖြားက မခတြမျး ပွောကွတဲ့ စကားပါ။ သူငယျခငျြးတှကွေားထဲမှာ ပွောကွတာလညျး ကွားဖူးကွတယျဟုတျ? ခတျေမီသူတိုငျး ကျောလာဂငျြကို သိကွသညျပေါ့လေ…
ဒါ့အပွငျ ကျောလာဂငျြကို ခရငျမျတှေ၊ မိတျကပျပစ်စညျးတှေ၊ ပေါငျဒါတှေ၊ ဆေးလုံးတှေ စသဖွငျ့ ပုံစံမြိုးစုံ လုပျပွီး သုံးစှဲလာကွတာ မကျြမွငျပါပဲနျော… ကျောလာဂငျြကို ယောငျးတို့ရဲ့ ကွှကျသား၊ အရပွေား၊ သှေး၊ အရိုး၊ အရှတျတှကေနေ ရရှိနိုငျပါတယျ။
အရပွေားရဲ့ ကြုံ့နိုငျဆနျ့နိုငျအား ကောငျးစပေါတယျ။
အရိုးနဲ့ ကွှကျသားတှယျဆကျမှုကို အားပေးပါတယျ။
အရိုးအဆဈနဲ့ အရှတျတှကေို ခိုငျခံ့စပေါတယျ ယောငျးတို့ရေ…
ဆိုတော့ ကျောလာဂငျြဆိုတာ ခန်ဓာကိုယျအတှကျ အဓိကလိုအပျခကျြလို့ ဆိုမယျဆိုရငျလညျး မမှားပါဘူးနျော… တကယျတော့ ယောငျးတို့၊ အကျဒျမငျတို့ရဲ့ ခန်ဓာကိုယျက ကျောလာဂငျြကို ကောငျးကောငျး ထုတျလှတျပေးနိုငျပါတယျနျော.. ဒါပမေဲ့ ထုတျလုပျနိုငျမှုက အသကျကွီးလာတာနဲ့အမြှ ကဆြငျးလာနိုငျတဲ့အပွငျ ဆေးလိပျသောကျခွငျး၊ ကနျြးမာရေးနှငျ့ ညီညှတျမြှတစှာ မစားခွငျး၊ နလေောငျခွငျးတှကေလညျး ကျောလာဂငျြထှကျရှိမှုကို တားဆီးထားပါတယျ။
ကဲ.. အဲဒီလိုတှေ ကျောလာဂငျြတှေ လြော့လာပွီ၊ အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ ကျောလာဂငျြထှကျနှုနျး နညျးလာပွီဆိုရငျ ဘာတှေ ဖွဈလာမှာတဲ့လဲ?
ကျောလာဂငျြမရှိရငျ –နဖူးတှနျ့ခွငျး၊အသားအရညျလြော့တှဲခွငျး၊အဆဈအမွဈကိုကျခဲခွငျးတှေ ဖွဈတတျပါတယျ။ ဒါဆို ကျောလာဂငျြရဲ့ အကြိုးကြေးဇူးတှကေရော?
(၁) အဆဈအမွဈကိုကျခဲခွငျးကို သကျသာစပေါတယျ
အသကျအရှယျကွီးရငျ့လာတာနဲ့အမြှ ကျောလာဂငျြဟာလညျး ခန်ဓာကိုယျမှာ လြော့နညျးလာပါတယျ။ ဒီလိုအခါမှာ အကွောအခဉျြတှေ တောငျ့တငျးပွီး အဆဈအမွဈတှေ ကိုကျခဲတတျပါတယျ။ ဒီဝဒေနာတှေ သကျသာပြောကျကငျးအောငျ ကျောလာဂငျြတှေ တိုးမွှငျ့ပေးဖို့လိုအပျလာပါပွီ။ ၂၀၀၉ ခုနှဈ လလေ့ာတှရှေိ့ခကျြတှအေရ ကွကျလညျခြောငျးရိုးကနေ ပွုလုပျထားတဲ့ ကျောလာဂငျြတှကေ အရိုးအဆဈကိုကျခဲခွငျးကို ၄၀ ရာခိုငျနှုနျးလောကျ သကျသာစပေါတယျတဲ့ ယောငျးရေ။
(၂) အသားအရကေို တငျးရငျးစပေါတယျ။
ကျောလာဂငျြရဲ့လူသိအမြားဆုံး ကောငျးကြိုးတဈခုပါ။ အသားအရကေို တငျးရငျးပွီး တောကျပမှုတှကေို ပေးစှမျးပါတယျ။ ဒီ မရှိမဖွဈ လိုအပျတဲ့ ပရိုတငျးဓာတျဟာ အရပွေားရဲ့ ကွုံ့နိုငျ၊ဆနျ့နိုငျစှမျးကို အထောကျအကူ ပေးတဲ့အတှကျ ယောငျးကိုအရှယျတငျစပွေီး ကနျြးမာလှပစပေါတယျ။ ဒါပမေဲ့ အသကျကွီးလာတာနဲ့အမြှ ကျောလာဂငျြထုတျလုပျနိုငျစှမျးတှေ ကလြာတာမို့ ဒီအခြိနျတှဆေို အသားအရေ တငျးရငျးမှု မရှိတော့ဘဲ ခွောကျသှလေ့ာပွီး အိုမငျးရငျ့ရျောလာစနေိုငျပါတယျ။ ဒါဆို ယောငျးအတှကျ ကျောလာဂငျြကို အပွငျကနေ သုံးစှဲပေးဖို့လိုအပျလာပါပွီ။ ဒီလို သုံးစှဲမယျဆိုရငျတော့ ၈ ပတျ အတှငျးမှာ အရပွေားတှနျ့တာတှကေို သိသိသာသာ ပြောကျကငျးလာတာကို တှရေ့မှာပါနျော.. (ခုတောငျ ကျောလာဂငျြတှေ သောကျရမလားလို့ စဉျးစားနပွေီမလား 😛 )
(၃) ကွှကျသားတှကေို ပွနျလညျတညျဆောကျပေးပွီး အဆီတှကေို လောငျကြှမျးစပေါတယျ။
ကွှကျသားတဈသြှူးတှရေဲ့ အဓိကလိုအပျခကျြဟာ ကျောလာဂငျြပါပဲ။ ကျောလာဂငျြမှာ ဂလိုငျစငျး- Glycine နဲ့ အမိုငျနိုငျအကျစဈ တို့ ပါဝငျတဲ့အတှကျ ကွှကျသားတညျဆောကျတဲ့နရောမှာ အရမျးကို အသုံးဝငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ Gym ဆော့နတေဲ့သူတှအေတှကျ ကျောလာဂငျြဟာ မရှိမဖွဈတဲ့အရာတဈခုပါနျော..
(၄) တငျပါးဆုံနဲ့ ပေါငျနားရှိ အဆီခဲမြားကို လောငျကြှမျးစပေါတယျ။
အရပွေားအောကျမှာရှိတဲ့ အဆီလှာတှေ မြားလာတာနဲ့အမြှ အပျေါကို တှနျးထိုးလာတဲ့အခါ အဖုအထဈ၊ အခြိုငျ့တှေ ဖွဈလာပါတယျ။ ကျောလာဂငျြက အဆီလှာတှကေို လောငျကြှမျးစတေဲ့အတှကျ ခန်ဓာကိုယျကို သှယျလလြှပစပေါတယျ။
(၅) အစာခွစေနဈကို ကောငျးမှနျစပေါတယျ။
အူထဲမှာရှိတဲ့ ကျောလာဂငျြဟာ အစာခွလေမျးကွောငျးတဈလြှောကျကို ကနျြးမာသနျစှမျးစပေါတယျနျော။ အူထဲမှာ ကာကှယျထားတဲ့ စနဈပွောငျးလဲသှားရငျ ဝမျးပကျြဝမျးလြှောဖွဈတတျပါတယျ။ ခန်ဓာကိုယျထဲမှာ ကျောလာဂငျြ လြော့နညျးလာတာနဲ့အမြှ အူရောငျခွငျးကို ပိုပွီး ဖွဈစနေိုငျပါတယျတဲ့ကှယျ။
ဒါဆို ကျောလာဂငျြကို အစားအစာထဲမှာ ဘယျလို ထညျ့စားသငျ့သလဲ?
ကျောလာဂငျြ ကွှယျဝရုံတငျမကပါဘူး၊ အရသာလညျးရှိ၊ ပွုလုပျရလညျး လှယျကူပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ စှတျပွုတျအဖွူထညျသောကျသုံးရတာ ရိုးလာပွီဆိုရငျ ကိုယျကွိုကျရာ ဟငျးသီးဟငျးရှကျတှေ၊ အသားတှထေညျ့ပွီး ထမငျးနဲ့ တှဲဖကျသုံးဆောငျနိုငျပါတယျ။
ပေါငျဒါ ဂယျြလတငျ- Gelatin သုံးပါ။
ဒီပေါငျဒါမှုနျ့ကို ရနေဲ့ရောပွီး စှပျပွုတျ၊ စတူးထဲမှာ ထညျ့ပွီး သောကျသုံးလို့ ရပါတယျ။
Collagen Peptides သုံးစှဲပါ။
ဒါကိုတော့ ဈေးကှကျထဲမှာလညျး အလှယျတကူ ဝယျယူလို့ ရပါတယျနျော။ သူ့ကို အစာခွလေိုကျတဲ့အခါမှာ အူက စုပျယူထားနိုငျတာမို့ ကျောလာဂငျြကို ခန်ဓာကိုယျက အပွညျ့အဝ ရရှိနိုငျတာမို့ တကယျ အသုံးဝငျတဲ့ နညျးလမျးတဈခုပါ။ ဒါကိုမှ ပေါငျဒါမှုနျ့ပဲ ရှိတယျဆိုရငျလညျး ရပါတယျ။ ဒီ ပေါငျဒါမှုနျ့ကို ကိုယျသောကျမယျ့ အအေး၊ အပူ၊ မဈရှိတျ စသဖွငျ့ ထဲကို ဖွူးပွီး သောကျလို့ရပါတယျ။
ယောငျးတို့ရေ…ဒီလောကျဆိုရငျ ကျောလဂငျြကယောငျးတို့ခန်ဓာကိုယျအတှကျ ဘယျလောကျထိအောငျ အကြိုးပွုနိုငျတယျ ၊ ကျောလဂငျြတှေ လုံလောကျသှားစဖေို့ ဘယျလိုတှေ စားသုံးရမယျဆိုတာတှကေို ကောငျးကောငျးကွီး သိသှားလောကျပွီ ထငျပါတယျနျော…
အားလုံးပဲ ကနျြးမာလှပတဲ့ ဘဝလေးတှေ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစကှေယျ..
Tags: collagen, digestive system, Knowledge, Muscle, powder, skin, young
For Her Myanmar March 1, 2019